६ वर्षका बालकको उपचारमा अस्पतालको लापरवाहि, उपचार गर्ने डराए ! रातभर चौतारामुनी – Samacharpati Samacharpati६ वर्षका बालकको उपचारमा अस्पतालको लापरवाहि, उपचार गर्ने डराए ! रातभर चौतारामुनी – Samacharpati
पाेखरा, २२ चैत । ताराखोला गाउँपालिका वडा नं. १ बाग्लुङ का एक बालकले शंकाकै भरमा चिसो रातको अधिकांस समय पोखराको खुला आकाश मुनि बिताए । उनका आफन्तका अनुसार उनी ६ दिनदेखी बिरामी छन् । गल्कोटको एक अस्पतालले उनलाई थप उपचारका लागि पोखरा रिफर गरिदियो । १० हजार खर्च गरेर उनिहरु रातारात पोखरा आए ।
५ बजे मनिपाल पुगेका उनलाई भर्ना गरेको आधा घण्टापछि हस्पिटलले निकालि दियो । सामान्य चेकजाँच पछि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाईयो, यो सवैका पछाडी कोरानाका अन्धभक्तको पराकाष्ठा स्पष्ट देखिन्छ ।
उनलाई पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको इमरजेन्सीबाट पनि पाँच मिनेट नबित्दै निकालियो । त्यसपछि आधारात उनिहरुले चौतारोमा बिताए । एक प्रहरीको सहायतामा राति १२ बजेपछि मात्र उनलाई हस्पिटलको एक कुनामा राखियो । फेरि उज्यालो नहुदै उनलाई फेरि निकालियो ।